Booliska Maraykanka Oo Ka Hadlay Xilliga Ay Cristiano Ronaldo Su’aalaha Ka Weydiin Doonaan Kiiska Kufsiga Ee Loo Haysto | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Booliska Maraykanka Oo Ka Hadlay Xilliga Ay Cristiano Ronaldo Su’aalaha Ka Weydiin Doonaan Kiiska Kufsiga Ee Loo Haysto
(10-10-2018) Booliska dalka Maraykanka ayaa shaaciyey inay su’aalo ka weydiin doonaan xiddiga reer Portugal ee Cristiano Ronaldo kiiska lagu soo oogay ee la xidhiidha kufsi la sheegay inuu u geystay haweenay lagu magacaabo Kathryn Mayorga oo u dhalatay USA.
Booliska magaalada Las Vegas ayaa toddobaadkii hore dib u furay kiis ay caddaymo u waayeen sannadkii 2009 markii lagu soo wargeliyey in kufsi ka dhacay Hotel ku yaalla magaaladaas, waxaase dhibbanihii waqtigaas oo ahayd Mayorga ay diidday inay bixiso caddaymo, sababtoo ah waxay heshiis ay lacag ku qaadatay la gashay Ronaldo, kaas oo dhigayay in aan la dacwaynin.
Warbaahinta Mirror Online oo la xidhiidhay booliska Vegas ayaa waxa loo sheegay in wakhti aan fogeyn la dhegaysan doono kiiska Ronaldo, inkasta oo aan la siinin taariikh cayiman.
Afhayeen u hadlay Booliska oo Mirror la xidhiidhay ayaa yidhi: “Xaqiiqadii weli ma garanayno xilliga ay dhici doonto, laakiin waanu dhegaysan doonaa isaga (Ronaldo)”
Boolisku waxay sheegeen inay weli baadhitaano ku hayaan shaybaadhadii laga qaaday Mayorga xilligii la kufsaday, isla marka ay arrintaas gunaanadaanna ay si toos ah ula xidhiidhi doonaan Cristiano Ronaldo oo ay weydiin doonaan su’aalo la xidhiidha falka uu ku eedaysan yahay inuu geystay.
Cristiano Ronaldo ayaa Axaddii diyaarad gaar ah ugu duulay dalkiisa Portugal markii ay dhamaatay ciyaartii uu goolka ka dhaliyey Udinese, hase yeeshee waxa aan lagu darin liiska xulka qaranka dalkiisa ee toddobaadka soo socda la ciyaari doona Poland iyo Scotland.
Ronaldo oo ay safarkiisa ku wehelinayaan xaaskiisa iyo afar dagaalyahan oo ilaaliya, ayaan la ogeyn wakhtiga ay ku sugnaan doonaan magaalada Lisbon, hase yeeshee waxa dhinaca kale lasoo deristay dhibaato kale oo haweenaydiisa Georgina ku saabsan.
Aabbaha dhalay quruxleyda mataanaha u dhashay Ronaldo ayaa lagu qabtay daroogo, waxaana ay arrintaasi murugo kusii beertay qoyskan la dhibaataysan fadeexadda kufsiga.